Homeसमाचारटिकटक बनाउँदा पुलबाट बजारिएका युवकको उपचारका क्रममा नि’धन
December 21, 2020 admin समाचार 3732
ती युवा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका १९ बिजौरीका २४ वर्षीय रमेश थापा रहेको बताइएको छ । उनको उपचारका क्र’ममा सोमबार बाँकेस्थित कोहलपुर मेडिकल कलेजमा ज्या&न गएको हो । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले सा’वधानी नअ’पनाउँदा दुर्घ’टना निम्तने गरेको छ ।
ती युवा पि’कनिक मनाउने क्रममा गएका र बबई गाउँपालिका ५ पुरन्धारा झरना नजिकैको बबई नदीको झुलुङ्गे पुलमा यस्तो घटना भएको थियो। टिकटक बनाउन पुलको स’पोर्टमा चढेका उनी त्यहाँवाट खसेका थिए । उनको अवस्था ग’म्भिर थियो । गम्भीर घाइते थापालाई राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरको प्रार’म्भीक उपचारपछि थप उपचारका लागि बाँकेको कोहलपुर मेडि’कल कलेजमा रेफर गरिएको थियो ।
शनिबार रमा’ईलो गर्ने भन्दै केही साथीहरु त्यस तर्फ गएका थिए । करिब २ दर्जन युवाहरु रमाइलो गर्दै गरेको अ’वस्थामा उनी अचा’नक पुलवाट खसे’का थिए । पर्यटकीयस्थल पुरन्धारा झरनामा पिकनिक खान गएका उनीहरुको यस्तो दु’र्घटना भएको थियो । थापा झन्डै २० मिटर माथिको पुलबाट बगरमा ब’जारिएका थिए । त्यसको भिडियो पनि सार्व’जनिक भएको थियो । हात गलेपछि तल खसेको भिडियो देख्न सकिन्छ ।- इताजा खबरबाट
March 4, 2021 admin समाचार 2830
May 1, 2021 admin समाचार 1999
May 1, 2021 admin समाचार 2065
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (204937)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (196411)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (195909)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (195772)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (194169)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (193891)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (192136)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (191664)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (184560)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (161245)